कला–साहित्य उत्सव शनिबारदेखि
कला–साहित्य उत्सवको चौथो संस्करण फागुन १८ देखि २० गतेसम्म हुने भएको छ । साहित्यिक अध्ययन, साहित्यिक कर्म गरिरहेकाहरुबीच विभिन्न विषयमा बहस र चर्चा गर्र्ने उद्देश्यले उक्त संस्करणको आयोजना गरिएको हो ।
पूर्वी झापाको सीमावर्ती सहर काँकडभिट्टामा हुने तीन दिने उत्सवमा नेपाल र भारतका साहित्य, कला र राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति तथा पाठकसँग प्रत्यक्ष अन्तरसंवाद गर्ने उत्सवका संयोजक हरि तिम्सिनाले बताए । राजधानी र मोफसलबीचको खाडल पुर्ने ध्येयले साहित्य उत्सवको आयोजना गर्र्दैै आएको तिम्सिना बताउँछन् ।
विभिन्न २२ सेसन रहने कला–साहित्य उत्सवमा कविता, विमर्श, बहसदेखि चित्रकला हुँदै नाट्य मञ्चनसम्मका कुराहरू समेट्ने रिडर्स झापाका दामोदर ढुङ्गेलले बताए । नेपालकै प्रतिष्ठित र प्रदेश –१ को सबैभन्दा ठूलो मेला मानिने कला साहित्य उत्सवमा प्रवेश निःशुल्क रहेको छ । उत्सवमा लेखकहरू अर्चना थापा, अमिना सिंह, सुप्रिया मानन्धर, बन्दना ढकाल, प्रणिका कोयू, सरस्वती प्रतीक्षा, डा. रेमिका थापा, सुबिना श्रेष्ठ, श्रद्धा घलेलगायत सहभागी बन्नेछन् ।
उत्सवमा साहित्यिक, प्राज्ञिक, कला, नाटक र सांस्कृतिक विषयमा अलग–अलग सत्र सञ्चालन हुनेछन् । प्रत्युष वन्त, नारायण वाग्ले, शिव गाउँले, सञ्जीव उप्रेती, आहुति, खगेन्द्र प्रसाईं, राजेन्द्र महर्जन, जेबी विश्वकर्मा, युग पाठक, पुण्यप्रसाद खरेल, भास्कर गौतम, विष्णु सापकोटा, झलक सुवेदी, महेन्द्र पी लामा, सुधीर शर्मा, अखिलेश उपाध्याय, राम कार्की, वसन्त बस्नेत, संगीत श्रोता, दीपक सापकोटा, अभय श्रेष्ठ, विनोदविक्रम केसी, सीके लाल, खगेन्द्र संग्रौला, प्रदीप गिरि, अनुभव अजित, डा. विश्व पौडेल पनि आउने कार्यक्रम छ । उत्सवमा पुस्तक मेला, देही आर्टको कला प्रदर्शनीका साथै परिवर्तन थिएटरले तयार पारेको ‘बिटुलो आख्यान’ नाटक मञ्चन हुनेछ । रिडर्स झापाले २०६९ देखि हरेक दुई वर्षमा कला साहित्य उत्सव गर्दै आएको छ ।